Indida ngoshe wangqongqa emsamu | News24
LAST UPDATED: 2018-06-19, 08:17
Indida ngoshe wangqongqa emsamu
Durban - Lishe langqongqa emsamo "lishisa impepho" ilungu lomndeni wakwaKhuzwayo eNkwambase, eNdwedwe, enyakatho yeKwasZulu-Natal ngoLwesihlanu ekuseni.
Kubikwa ukuthi lesi sigameko esenzeke ezintathakusa ngoLwesihlanu, sishiye amalungu omndeni wakwaKhuzwayo edidekile, enemibuzo engaphenduleki ukuthi uSkhukhukhu Bright Mhlongo, 30, ubesha nje ubezokwenzani emsamu ngoba akanalo ilungelo lokushisa impepho.
ILANGA lithole ukuthi isidumbu sikaMhlongo sitholwe emsamu siguqile eduzane kokhamba olunotshwala besizulu sesishe sangqongqa ngemuva kokuthungeleka ngomlilo endlini kalawondi.
Kubikwa ukuthi lo mndeni ubuhlele umcimbi ngoLwesihlanu sekugingqwe izimbuzi ezimbili ebekulindelwe ukuba zidliwe ngalo uLwesihlanu ngangoMgqibelo.
OLUNYE UDABA: Ibiyoshunqiselwa impepho ingane obekuthiwa ithunjiwe
Ngemuva kokwenzeka kwalesi sigameko, kugcine kuphoqeleke ukuba umcimbi umiswe yize besezihlatshiwe izimbuzi kwagaywa notshwala.
ILanga lihambele umndeni wakwaMhlongo, KwaBhanoyi, e-Oakford, khona eNdwedwe izolo lapho kuzalwa khona umufi, lafica isimo simuncu.
Leli phephandaba lifikisane namakholwa abezokhalisa umndeni wakwaMhlongo kubonakala ukuthi umphakathi usathukile.
Udadewabo kamufi uThandeni Mhlongo uthi namanje umndeni usaxakekile futhi usenemibuzo engaphenduleki ngokushona komfowabo ngale ndlela ekubeni bekujatshulwe kuzoba nomcimbi.
"Umfowethu uhambe lapha ekhaya ngoLwesithathu ntambama eyongena emsebenzini engumuntu ozophuma ngakusasa ngoLwesine ayekomalume (kwaKhuzwayo) lapho bekunomcimbi khona.
"Uphume emsbenzini ekuseni wanikela khona eNkwambase, eyosiza njengoba umcimbi ubuzoqala ngoLwesihlanu.
"Ngokuthola kwethu, ufike komalume wahlala usuku lonke bematasa belungiselela umcimbi kwaze kwahlwa. Sitshelwe ukuthi ngesikhathi sebehlakazeka sekuyolalwa ezintatha zangoLwesihlanu, umfowethu ungene kulawondi lapho kushiselwa khona impepho singazi ukuthi ubeyokwenzani ngoba akanalo igunya lokushisa impepho.
"Asazi ukuthi kwenzakeni ngesikhathi ephakathi, kuthiwa kubonakale ngelangabi seliqhuma phezuluyena engaphakathi. Sibe sesishayelwa ucingo lapja ekhayakuthiwa masiphuthume kukhona umonakalo osuvelile.
"Sifike khona ulawondi ungakacimi njengoba umlilo ubusavutha nokuthe uma ucishwa satholakala isidumbu sikamfowethu siguqe ngamadolo phambi kwaso kukhona ukhamba obelunotshwala besizulu.
"Amateki abewagqokile abengaphandle kwendlu okukhomba ukuthi ungene ehamba ngezinyawo," kusho uMhlongo.
Uthi ngokuzwa kwabo umufi ubephuzile kanti abanalo ulwazi lokuthi umlilo uqalwe yini. Uthi okubadida kakhulu, ukuthi kuyabonakala ukuthi umfowabo ubengalele kodwa ushe ebhekile eguqile.
"Okusidida kakhulu wukuthi umfowethu ubengalele ngesikhathi esha kodwa ubeguqe ngamadolo. Kuyasixala ukuthi uma ubebhekile uhlulwe yini ukuphuma abaleke uma ebona ukuthi kuyasha emsamo.
"Isidumbu sitholwe eguqile ebambelele odongeni nokusixakayo ukuthi lokhu kwenzeke kanjani," echaza.
Imizamo yokuthola uDumisani Khuzwayo, uninalume kamufi nobenze umcimbi kayiphumelelanga, ucingo lwakhe beluvaliwe.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uCaptain Nqobile Gwala uqinisekise isigameko wathi kuvulwe idokodo ngokufa komuntu, amaphoyisa ayaphenya.
UDkt Velaphi 'Bhedlindaba' VVO Mkhize oyisazi kwezamasiko uthi uma kuvele into enjengalena kumele umndeni uye emhlahlweni kubhekwe ukuthi ngabe lo mshophi udalwe yini.
"Kumele umndeni uthole ukuthi yini eyimbangela yalokhu ngoba kungenzeka ukuthi lolu laka lwalabo abebenzelwa umcimbi.
"Uma sebetholile ukuthi yini imbangela, kumele babuyele ekhaya bayogeza umuzi emsamo.
"Lokhu bakwenza ngaphandle kokushisa impepho kodwa kuhlatshwe isilwane, bese kuthathwa igazi nomswane kugezwe ngawo," klusho yena.
Khayelitsha 08:17 AM